China FOTON C10 / C12 EV fekitori uye vagadziri | Foton
Nokusarudza maMabhasi emabhizimusi, unosarudza zvifambiso zvevoruzhinji zvehungwaru. Kubva mangwanani-ngwanani kusvika manheru, bhazi rega rega reFotos rinogona kumhanyisa masevhisi akazara, munzira dzese. Iyo inokupa iwe yekupedzisira inochinjika mune yakanakisa nzira.
Kunopindirana Dimension 12000 * 2550 * 3100/3250 (YeC12)
Kurambidza Kurema 12.7 / 12.9T
Passenger / Seating Kugona 76-82 / 23-43
Passenger Door 2 mu-swing maviri mapapiro masuo
Chimiro chemuviri Monocoque Yakadzika-kupinda / Yakadzika-pasi
Iine zvakanakira zvakanakira senge kugona, kuchengetedza-simba, nyaradzo uye kuchengetedzeka, inoita basa rakakosha mumaguta akavandudzwa ekufambisa kweruzhinji nekusimudzira mota dzakasununguka, kusangana nezvinodiwa zvevashandisi vakasiyana.
Foton C10 / C12 EV bhazi reguta rakavimbika chose, rakachengeteka, rinobatsira chigadzirwa, kupindura kune zvazvino uye zveremangwana zvido zvekutakura guta. Kubva pane dhizaini kusvika kuchikamu chekuronga, kusimbisa kwedu kwagara kuri pakuwana kugona kukuru kwesimba, kuwedzera huwandu hwebhazi uye kugadzirisa kupera kwaro kwehupenyu manejimendi.
Yakashongedzerwa neepamberi yakazvimiririra inodzora mota kudzora system, iine makore ekushandira mashandiro, mwero wekupinda wakakwira kupfuura 98%.
Yakachena magetsi akananga dhiraivhu dhizaini
5% yakakwira kupfuura zvigadzirwa zvakafanana musimba rekushandisa reshiyo;
Muviri wakareruka, 5% yakareruka kupfuura zvigadzirwa zvakafanana.
Multiple kuchaja modes
Mukana uye husiku kuchaja, uchiona akawanda ekugadzirisa musanganiswa wemisika dzakasiyana kuti uwane akasiyana anodikanwa ekushandisa.
Auto tembiricha-kudzora kutonhora system
Kuziva njere yekumhanyisa mirawu inoenderana nezvinodiwa nemwaranzi kuti uwane kugona-kukuru uye kuchengetedza simba (kunatsiridzwa ne5%)
Foton inopa vanogadziridza mitsara kuronga zvine chekuita nemota dzekushandisa nzira, senge Megalopolis, Guta riri pakati nepakati, Guta diki riri pakati nepakati.
Tsigiro yehunyanzvi: inonzwisisika kutora zviwanikwa zvevashandisi uye zvinodiwa mukufunga, kubatanidza mutengo wezvivakwa nemamiriro ezvinhu ezvigadzirwa zvakasiyana kubatsira vatengi kuvaka zvirongwa zvehupfumi zvinogoneka zvinogoneka Remote manejimendi: iyo yekure-kure manejimendi system - iBlue, kubatsira vatyairi kuti vazive kutonga kwakanaka uye vanotsigira vanoshanda kuti vabudirire zvine hungwaru mashandiro Ekutarisa kudzidziswa: kubatsira vanogadzirisa kugadzirisa anoshanda mashandiro nematambudziko kuburikidza nekuratidzira mashandiro emota, kudzidziswa kwevashandi, kutungamira kwekutungamira kwechikwata kubva pakutenga kwechigadzirwa kusvika pakuzoshanda kwekupedzisira, nezvimwe
On-board management system - iTink, ine zvigadzirwa zvekuchengetedza kwezvakatipoteredza zvine hungwaru, rutsigiro rwekushandisa zvine hungwaru uye sevhisi yehumwe, ichigadzira yakabatana manejimendi manejimendi kune vanhu, mota nemigwagwa.